महिन्द्राको बाइक वा स्कुटर किन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् विशेषता, मूल्य कति ? – BikashNews
महिन्द्राको बाइक वा स्कुटर किन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् विशेषता, मूल्य कति ?
२०७६ असोज १ गते १९:३४ विकासन्युज
काठमाडौँ । भारतीय मोटरसाइकल उत्पादक कम्पनी महिन्द्रा टू व्हिलर्सको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता अग्नि इन्कर्पोरेटेड प्रालिले नेपालमा महिन्द्राका ६ ओटा मोडेलहरु विक्री वितरण गर्दै आएको छ ।
‘गस्टो आरएस’, ‘गस्टो भिएक्स’ र ‘गस्टो १२५’ गरी स्कुटरका तिन मोडेल र त्यसैगरी ‘सेन्ट्युरो डिस्क ब्रेक’, ‘सेन्ट्युरो रकस्टार’ र ‘मोजो एक्सटि ३००’ गरी मोटरसाइकलका पनि तीनओटै मोडेलहरु कम्पनीले नेपाली बजारमा उपलब्ध गराएको छ । आउनुस् जानौं ती मोडेलहरु र तिनका मूल्यका बारेमा ।
गस्टो ११० (गस्टो आरएस र गस्टो भिएक्स)
गस्टो ११० हेर्दा डिसेन्ट देखिएतापनि यसमा केहि यूनिक फिचरहरु समावेश गरिएका छन् । जस्तै हाइट एडजस्ट गर्न मिल्ने सिट, रिमोट फ्लिप की, फाइण्ड मि ल्याम्प, गाइड ल्याम्प, ठूला ट्यूवलेश टायर, इजि फ्रन्ट किक आदि ।
यो स्कुटरमा प्रयोग भएको १०९.६ सीसी ४–स्ट्रोक एयरकुल्ड इञ्जिनले ८.० बिएचपिको पावर र ९ एनएमको टर्क प्रोड्यूस गर्दछ । यसले दिने माइलेज र यसको मूल्यले नै यो स्कुटरलाई अरुको तुलनामा खास बनाएको छ । कम्पनीले गस्टो ११० ले ६३.७ केएमपिएलको माइलेज दिन्छ भनी क्लेम गरेको छ ।
नेपालमा गस्टो ११० को आरएस र भिएक्स गरी दुई अलग भेरियन्टहरु विक्रि भइरहेका छन् । कम्पनीले नेपाली बजारमा गस्टो आरएसको मूल्य रु.१,८२,५०० तोकेको छ भने गस्टो भिएक्सको मूल्य चाहिँ रु.१,८६,५०० तोकेको छ ।
गस्टो ११० भन्दा केही पावरफुल यस स्कुटरमा टेलिस्कपिक फ्रन्टफर्क र हाइड्रोलिक रियर शक दिइएको छ भने ब्रेकको रुपमा यसका दुवै चक्कामा ड्रम ब्रेक दिइएको छ । त्यसैगरी यो स्कुटरमा १२ इञ्च अलोए व्हील पनि दिइएको छ भने अन्य फिचरहरु चाहिँ गस्टो ११० को जस्तै नै छन् । इञ्जिनको कुरा गर्नुपर्दा यस स्कुटरमा एमसिडिआइ टेक्नोलोजी सहितको १२४.६ सीसीको इञ्जिन दिइएको छ जसले ८.५ बिएचपिको पावर र १० एनएमको टर्क प्रोड्यूस गर्दछ । नेपालमा उपलब्ध गस्टो १२५ को मूल्य भने रु.२,०६,५०० रहेको छ ।
सेन्ट्युरो डिस्क ब्रेक
यो मोटरसाइकलको डिजाइन एलिमेन्टका रुपमा फ्यूल ट्याङ्क तल रहेको गोल्डेन टुइन बार, मल्टि–कलर्ड डेकल्स र डिजिटल ड्यासबोर्ड रहेका छन् । त्यसैगरी यसको अन्य फिचरहरुका रुपमा फ्लिप की, इञ्जिन इम्मोबलाइजर, एनटि–थेप्ट अलार्म, एलइडि पार्किङ लाइटजस्ता कुराहरु रहेका छन् । इञ्जिनको कुरा गर्नुपर्दा यस मोटरसाइकलमा १०६.७ सीसीको सिङ्गल सिलिण्डर एयरकुल्ड इञ्जिन दिइएको छ जसले ८.४ बिएचपिको पावर र ८.५ एनएमको टर्क प्रोड्यूस गर्दछ । अगाडिको चक्कामा डिस्क ब्रेक दिइएको यस मोटरसाइकलको मूल्य नेपाली बजारमा रु.१,७५,००० रहेको छ ।
यस मोटरसाइकलमा सेन्ट्यूरो डिस्क ब्रेकमै दिइएको इञ्जिन भएतापनि अन्य केहि फिचरहरु भने फरक रहेका छन् । तुलनात्मक रुपमा हेर्दा सेन्ट्युरो रकस्टारमा बोल्ड रकस्टार ग्राफिक्स्, मेन्टेनेन्स फ्रि ब्याट्री, लामो सिटजस्ता फरक फिचरहरु रहेका छन् । कम्पनिले नेपाली बजारमा यस मोटरसाइकलको मूल्य रु.१,६३,००० तोकेको छ ।
मोजो एक्सटि ३००
यस मोटरसाइकलमा अप्साइड डाउन फर्क र पिरेली टायरजस्ता प्रिमियम कुराहरुको प्रयोग गरिएको छ । यसका साथै यस मोटरसाइकलमा २९५ सीसीको लिक्विड–कुल्ड ४–भल्भ सि¨ल–सिलिण्डर फ्यूल इन्जेक्टेड इञ्जिन दिइएको छ जसले २७ बिएचपिको पावर र ३० एनएमको टर्क प्रोड्यूस गर्दछ । त्यसैगरी यस मोटरसाइकलमा ६–स्पिड गियरबक्स पनि दिइएको छ । नेपाली बजारमा मोजो एक्सटि ३०० को मूल्य भने रु.५,८०,००० रहेको छ ।